Oromiyaa: Odeessa Cubbuu isin dhageessisna hadha! - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromiyaa: Odeessa Cubbuu isin dhageessisna hadha!
Alamuu Simee tibba kana Naqamtee ture. Hoteela Shaalom qubatee ture. Keessummeesitoota Hoteela Shaalom keessaa mucaa shamarree tokkotu jirti. Mucaa Wallagga Lixaati. Alumuun mucaa kanarra ija buuufatera. Sana booda “nadhukkuba ijoolleen shamaraa kutaa ciisichakootti tajaajila naaf haa gootu” jedhe. Manaajerri Hoteelichaa “lakki kun seera manichaas miti; dhiirri isin haa tajaajilu” jedhan. Sana booda “lakki shamarran naaf ergi malee” jennaan mucaa shamaraa kana itti ergan. Isheenis deemtee ulaarra dhaabbattee “maaltu siniif haa dhufu” jette. Alamuun “oluma seenikaa” jedhe. Shamarreen kunis “lakki ol hin seenu natti himadhaa waan siniif dhufu” jennaan meeshaadhaan doorsise. Shamarreen kunis “kana sodaasaa hin qabu” jettee biraa deemte. Kuni kan ta’e kaleessa (Sadaasa 17/2020). Mucayyoon kaleessa achii baatee har’a hojii hin galle.
Dhukkuba Alamuun shamarraniin yaalamu kun maali laata?
Xoophiyaa Impaayera Saboonni Jeettii, Misaayiliin wal haleeltu”fi jaarraa 21ffaa kana keessatti ilmi namaa akka beeyladaatti ableen itti gorra’amu kana Biyyadha, nidimokraateessina naan jettakaa ati abbaan Dimookrasii??